सिल्टल एक अद्भुत स्क्रैपिंग सफ्टवेयर प्रस्तुत गर्दछ
एक वेब क्रलर एक प्रोग्राम हो जुन इन्टरनेट को माध्यम ले स्वचालित रूप देखि स्रोतहरु को लागी ब्राउज गर्दछ लिपि. यो वेब पेजहरूमा किवर्डहरू, लिङ्कहरू र विभिन्न सामग्रीको खोजी गर्दछ. वास्तव मा, वेब क्रलिंग प्रयोगकर्ताहरु को लागी नेट मा अधिक उपयोगी जानकारी खोज्न को लागी केंद्रित छ.
वेब क्रलर काम गर्दछ
वेब क्रलरले वेबमा पृष्ठहरू फेला पार्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा वर्गीकृत गरी निश्चित प्रश्नहरूको समर्थन गर्न मद्दत गर्दछ।. वेब क्रलरहरू सबै कामहरू विभिन्न नामहरूमा रोबोट र स्वचालित रूपान्तरणकर्ताहरू जस्तै गर्छन. प्रत्येक समयमा वेब खोजकर्ताहरूले विशेष खोजी क्वेरी टाइप गर्दछन्, यी क्रलरले सटीक डेटा फेला पार्न सबै सान्दर्भिक वेब पृष्ठहरू स्क्यान गर्न सक्छन्. जब क्रलरहरूले वेब पृष्ठमा भेट्टाए, उनीहरूको अन्य पृष्ठहरू हेर्नका लागि हेर्न सक्ने योग्य हुन सक्छन्. नतीजाको रूपमा, वेब क्रलरहरू विभिन्न नयाँ साइटहरूमा लिंक गर्न सक्छन्, अवस्थित साइटहरूमा सम्भावित परिवर्तनहरूको नोटहरू लिन्छन् र तिनीहरू पनि कुनै पनि मृत लिङ्क पत्ता लगाउन सक्छन्।. यस तरिकाले, वेब क्रलरहरूले विभिन्न ग्राहकहरूलाई क्रस गर्न सक्छन् जुन उनीहरूको ग्राहकहरु द्वारा अनुरोध गरिएको परिणामहरु एकत्रित गर्दछ. यसबाहेक, वेबसाइट मालिकहरूसँग विकल्प छ कि तपाइँको पृष्ठहरू ब्लक गर्न चाहने निर्णय गर्ने निर्णय गर्ने.
डेटा खनन: एक प्रभावी तकनीक
डेटा खननले वेब क्रलरलाई इन्टरनेट मा डेटाबेसबाट विभिन्न जानकारी निकाल्न मद्दत गर्न सक्छ।. यो कार्यले तिनीहरूलाई समय र ऊर्जा बचत गर्छ, र त्यसैले तिनीहरू आफ्नो कम्पनीको लागि अन्य परियोजनाहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन्. त्यहाँ केही प्रयोगकर्ताहरूको पछिल्लो व्यवहार विश्लेषण गर्न सक्ने डाटा खनन लागि केही उपकरण छन् र तिनीहरूले पनि कारोबार फलिफाप गर्न मद्दत रुझान भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ. आज, डेटा खननले इन्टरनेटमा डेटाको निर्दिष्ट नमूना पत्ता लगाउन सक्छ जुन पेशेवरहरू पनि सम्झन सक्दछ. डेटा खनन एक महत्वपूर्ण र लोकप्रिय प्रक्रिया हो. निष्कर्षण प्रक्रियाको बेला, वेब खोजीकर्ताहरूको संख्यामा थुप्रै त्रुटिहरूको सामना गर्नु पर्छ, साथै केहि डेटा जुन विभिन्न भाषाहरूमा छ र अनियमित अंक-अप हुन्छ.
छविहरूबाट डेटा निकाल्नुहोस्
आज धेरै कम्पनीहरू खरीदारी तुलनाको लागि चित्रहरू निकाल्न पनि हुन्छन्, र तिनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूको लागि अझ राम्रो प्रदान गर्नका लागि विश्लेषण गर्छन्।. वेब क्रलिंग गर्ने क्रममा, उनी वास्तव मा त्यहि उत्पादनका छविहरू र साथै बजारमा समान उत्पादनहरू हेर्न सक्छन्.
वेब क्रेलरहरूको महत्त्व
आज धेरै कम्पनीहरू एकत्रित शक्तिशाली क्रान्तिको लागि वेब क्रलरहरू प्रयोग गर्छन्, विभिन्न डेटाहरू जम्मा गरेर, जस्तै समान उत्पादनहरूको मूल्यहरू, समीक्षाहरू , संपर्क सूची र धेरै तस्बिरहरू. तिनीहरूले इकट्ठा भएका तस्विरहरूलाई उनीहरूको सेवा सुधार गर्न र तिनीहरूका प्रतियोगिहरूको तुलनामा राम्रो उत्पादन र मूल्यहरू वितरण गर्न मद्दत गर्न सक्छन्. नतिजाको रूपमा, उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई राम्रो देख्न सक्छन् र अधिक सफल हुन सक्छ. त्यसैले, वेब क्रलरहरू व्यवसायहरूको लागि अद्भुत मद्दत हुन सक्छ, जस्तै ई-वाणिज्य साइटहरू र अन्य ब्लगहरू, जुन लाभदायक र सफल हुन चाहन्छन्।. आजकाल धेरै व्यवसायहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धाहरू हटाउन र अधिक ग्राहकहरू प्राप्त गर्न सबैभन्दा प्रभावशाली र समृद्ध तरिकाहरू पत्ता लगाउन खोजिरहेका छन्. वेब क्रलरहरूले उनीहरूको उत्पादनको गुणस्तर सुधार गरेर थप सफल हुन मद्दत गर्न सक्छन्, थप उचित मूल्यहरू छन् र अझ राम्रो प्रस्ताव गर्छन् Source .